Kenya miyey waddaa Olole ballaaran oo ka dhan ah Soomaaliya? - BBC News Somali
Kenya miyey waddaa Olole ballaaran oo ka dhan ah Soomaaliya?
Soomaali badan oo ku nool dalka Kenya iyo daafaha caalamka ayaa caro ka muujiyay muuqaal ay duubeen mutacallimiin Kenyan ah oo ka hadlay muranka badda ee u dhexeeya xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho.
Muuqaalka oo ay soo duubeen ardey Kenyan ah oo jaamacado ka dhigta dibedda ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo kaashanaysa dalal caddaan ah ay gumaysan rabto Kenya, isla markaana ay doonayso inay dhacdo badda lagu muransan yahay.
Dhaliyarada muuqaalka ku jirta ayaa ku doodaya in haddii maxkamadda cadaallada ee caalamiga ah ay go'aamiso in Soomaaliya ay leedahay badda lagu muransan yahay ay taasi horseedi doonto in Kenya ay noqoto dal aan bad lahayn.
"Ma oggolaaneyno in taako kamid ah dhulkeenna la qaato… waxaan ku wargelineynaa walaalahayaga Soomaalida ee aanan taageerada siinnay… ee qaxootinimada kasoo gudbay ee noqday milkiilayaasha xaafadda Islii, rugta ganacsiga labaad ee ugu weyn Nairobi waa iney joojiyaan xukuumadda Muqdisho" ayaa lagu yiri muqaalka.
Waxay sidoo kale sheegeen in dowladda Soomaaliya ay dooneyso inay xoog ku qaadato qeyb kamid ah dhulkooda iyadoo usii mareysa garsoore soomaaliyeed oo ka tirsan maxkamadda isla markaasna aysan aqbali doonin.
Professor Cabdiwahaab Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa BBC u sheegay in dadka soo duubay muqaalka aysan wax saameyn ah ku laheyn dowladda Kenya balse ay doonayaan inay xiisad hor leh ka dhex abuuraan labada dal.
"Dadkan waxay katirsan yihiin macadka uu maamulo Profesoorka Kenyaanka ah, Mutahi Ngunyi , waa macalin iyo ardeydiisa... waxay doonayaan in labadan waddan oo walaalaha ah ay xiisad ka dhex abuuraan" ayuu yiri Professor Cabdiwahaab.
Waxaa uu sheegay in Professor Mutahi Ngunyi aanan laga fileyn in hadaalkaas uu kasoo baxo, balse uusan ka turjumeyn dowladda Kenya.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in ninkan ka dambeeyay hadalladani uu doonayo inuu wax ka baddallo fikradda shacabka Kenya ay ka heystaan muranka taagan ee badda iyo Soomaalida maadaama uu yahay nin aqoonyahan ah oo si weyn looga qaddariyo gudaha dalkaas.
"Dowladda Kenya ayaa loo baahan yahay inay wax ka qabato ninkan doonayo inuu xiisadda ka dhex abuuro iyo soomaaliya ay dowladda Kenya la hadasho, waxyaabahan hadda uu sameynayo waa waxyaabo dadka kicin karo ama isku diri karo" ayuu yiri Cabdiwahaab Cabdisamad.
Qaar kamid ah dadweynaha isticmaala baraha bulshada ayaa ka hor yimid hadalka kasoo baxay ardayda Mutahi Ngunyi, waxay ku tilmaameen mid lagu qoslo oo ka dhan ah Soomaalida.
Kenya ayaa horraan ku doooday in dacwaddan ay ka baxsantahay xeer xayndaabka maxkamadda, arrintaasi oo ay maxkmaddu ku gacan seyrtay, kana dalbatay Kenya inay jawaab ka bixiso eedeymaha ay Soomaaliya soo gudbisay.
Maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ayaa ilaa iyo imika aanan go'aan ka gaarin muranka badda labada wadan, balse Kenya ayaa dhowr jeer sheegtay in muranka badda ay tahay in labada dal ay qaab wadahadal ku xalliyaan muranka badda.